Missing Julie Ny Fametrahana Frame - Famolavolana
Ny Fametrahana Frame
Alatsinainy 16 Mey 2022
Ny Fametrahana Frame Ity famolavolana ity dia manolotra fametrahana famandrihana sy fifandraisana eo an-trano na any ivelany, na jiro sy aloka. Maneho ny heviny izy raha toa ny olona mijery bolo mba hiandry ny hiverenan'ny olona iray. Ny karazany sy ny haben'ny fitaratra vera dia ampiasaina ho mariky ny faniriana sy ny ranomaso mba hanondroana ny fihetseham-po izay mety hiafina ao anatiny. Ny faribolana vy sy boaty dia mamaritra ny fetin'ny fihetseham-po. Ny fihetseham-po omen'ny olona iray dia mety tsy hitovizany amin'ny fomba fahitana azy toy ny sary ao amin'ny efitrano.
Anaran'ny tetikasa : Missing Julie, Anaran'ny mpamorona : Naai-Jung Shih, Anaran'ny mpanjifa : Naai-Jung Shih.
Ity famolavolana tena tsara ity dia mpandresy amin'ny loka famolavolana volamena amin'ny vokatra jiro sy famolavolana tetikasa famolavolana tetikasa.	Tokony ho hitanao tokoa ny portfolio-n'ny famolavolana mpamorona volamena nahazo mari-pankasitrahana vaovao, fanavaozana, famoronana jiro ary famoronana jiro.
Fantaro bebe kokoa momba io famolavolana io
Famolavolana ny andro
Ny famolavolana mahavariana. Tsara famolavolana. Ny famolavolana tsara indrindra.
Asabotsy 14 Mey 2022
Ny famolavolana tsara dia miteraka lanja ho an'ny fiaraha-monina. Isan'andro dia misy tetik'asa famolavolana manokana izay mampiseho fahombiazana amin'ny famolavolana. Androany, faly izahay hampiseho endrika famandrihana loka manome fiovana tsara. Izahay dia hiseho ireo famolavolana lehibe sy manome aingam-panahy isan'andro. Ataovy azo antoka fa mitsidika anay isan'andro izahay mba hankafizantsika ireo vokatra sy famolavolana vaovao tsara avy amin'ireo mpamorona lehibe indrindra manerantany.
Tohizo ny famakiana
Fampahalalana momba ny tetikasa
Zavakanto, kanto ary kanto efa vonona
Araho ary araho
Zava-nisongadina ny vaovao
180º North East Tantara Alatsinainy 16 Mey
Ballo Fitaterana Alahady 15 Mey
CATINO Ny Fanangonana Efitrano Fandroana Asabotsy 14 Mey
Avoahy ny famolavolana ataonao
Mpanamboatra, mpanakanto, maritrano, mpanova ve ianao na mpikarakara marika? Misy fanao tsara ve tianao hozaraina? Tena liana izahay amin'ny famoahana ny endrika am-boalohany sy ny famoronana avy amin'ny mpamorona, artista, arsiteky, mpanova ary marika manerantany. Raiso an-tsoratra androany ny volavolanao.
Mampiroborobo ny famolavolana ataonao
Mey 2022 (93)
Aprily 2022 (90)
Martsa 2022 (93)
Febroary 2022 (84)
Fanadihadihana famolavolana ny andro Alatsinainy 16 Mey
Tantara momba ny andro Alahady 15 Mey
Famolavolana ny andro Asabotsy 14 Mey
Mpamorona ny andro Zoma 13 Mey
Ekipa mpamorona ny andro Alakamisy 12 Mey
Ny Fametrahana Frame Naai-Jung Shih Missing Julie